Malunga Nathi-Jiangsu Meixin Optoelectronics Iteknoloji Co., Ltd.
Njengomphandi oqeqeshiweyo, umenzi kunye nomthengisi, I-Jiangsu Meixin Optoelectronics Technology Limited Corporation ngomnye wabenzi abakhokelayo kwiminqwazi yokuloba e-China. Sisebenza kwicandelo lokubonelela ngeemveliso zokhuselo lwamehlo kwiinkqubo zokuthambisa, kubandakanya iiglasi zentsimbi, iminqwazi yokuphelisa umthunzi, umthuthuzeli womoya ococekileyo kunye nezixhobo.
Ngophando lwenzululwazi oluphambili, ukuvelisa kunye nokuvavanya izixhobo, inkampani yethu yenye yeenkampani eziphambili ezifundayo kunye nokuvelisa iimveliso ezifanelekileyo kwilizwe lethu. Sigxininisa kwindalo yesayensi kunye nezobuchwepheshe kunye nophando oluzimeleyo kunye nophuhliso. Iipesenti ezingama-20 zabaqeshwa kwinkampani yethu ngoochwephesha, eli liqela lobugcisa ekufuneka lizingcayo. Iimveliso zethu zifikelele kwinqanaba eliphambili lamazwe.
Inkampani yethu ijolise ekuqhubekeni kwezinto ezintsha kunye nokuphumelela kwintsebenziswano kunye nabathengi. Siza kubonelela ngeemveliso eziphambili kunye neenkonzo ngokunyaniseka okukhulu nangomdla omkhulu.
I-MX-9 Isigcina-ntloko esimnyama seWelding yombane ngombane
Ukuthembela kwethu kuyeyona nto iphambili kuthi ekuqhubeleni phambili ngenkqubela, nceda uthembele kwiipesenti ezili-100.
I-Jiangsu Meixin Optoelectronics Technology Co, Ltd., e-Nantong City, kwiPhondo le-Jiangsu, lishishini lobugcisa, elisebenza ngokukhulisa, ukuvelisa, kunye nokuthengisa iimveliso zombane. Iimveliso eziphambili: Imaski emnyama yokufaka iwelding, izixhobo, iziqhushumbisi, i-Stud welder kunye nezinto zayo kunye nokunye.
Ngaphantsi kubantu aba-5
I-0% Ixabiso lokuphendula ngokukhawuleza
I-3000 - 5000 iimitha zesikwere
Sekiso se CE